Mucaaridka Congo oo diidey inay joojiyaan qabsashadda Caasimadda Goma | Somaliland.Org
November 28, 2012	Congo: (Somaliland Org) Xoogagga Mucaaridka falaagoobey ayaa gacanta ku haya caasimadda Goma ee Jamhuuriyadda Dimuquraadigga ee Congo maalintii Salaasadda, saacaddo kadib wakhtiggii kama danbaystaa ee ay u qabteem hogaamiyayaasha gobolku iyo Midowga Afrika in ay wakhtigaasi caasimadda kaga baxaan ayaa muddo dhaaftay. Hogaamiyaha kooxda siyaasadda mucaaridka ee lagu magacaabo M23, Jean-Marie Runiga ayaa ugu sheegay warbaahinta Caasimadda Goma in mucaaridku ay dhulkoodda haysan doonaan ilaa iyo inta ay wadda hadalo la yeelanayaan Xukumadda Gongo oo shuruuhadoodda ay helayaan. Kooxdan ayaa dalabkoodda ay ka mid tahay siideynta raxan maxaabiis dhinaca siyaasadda, baadhitaano eedaymo dilal la bartilmaameedsaday wadanka, iyo caydhintii Golahii doorashooyinka Qaranka iyo weliba baadhitaanno natiijadda doorashaddii sanadkii hore.
Kooxdan lagu magacaabo M23 ayaa lagu magacaabay heshiis nabadda oo xukumadda ay la gaadhaan march 2009, taasi oo xukumadda ay ku eedeeyeen inay sharcigga ku tumanayso. Hogaamiyayaasha Afrikaanka oo ku shirsan wadanka deriskaa ee Uganda dhamaadkii asbuuca ayaa soo saaray hadal ay kaga dalbanayaan kooxda M23 inay ka baxaan ilaa 20 Kilometers, 12 Miles Waqooyigga Goma, taasi oo ah shuruudda wadda xaajoodku ku furmaayo. Hogaamiyayaasha Gobolka haradda weyn ayaa ugu baaqay mucaaridka inay joojiyaan noocyadda dhaqdhaqaaqa dagaaladda, oo ay joojiyaan siddoo kale afgenbigga dowlad la soo doortay.
Hogaamiyayaasha M23 ayaa yidhi Isniintii waanu ka baxaynaa caasimadda dagaalku cabsidda geliyey, keliyaata haddii wadda hadaladdu noqdaan qaar midho dhala. Dhamaan Ciidamadda dowladda iyo kuwa mucaaridkaa ayaa la soo dhoobay galbeedka Goma, taasi oo ka dhigaysa goobtaasi in ay suuragal noqonayso in mustaqbalka isku dhac ka yimaaddo. Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Lambert Mende Omalang oo ku sugan Kinshasa ayaa ku qeexay jawaabta M23 mid xaqiiqddii ciyaala ama caruurnimaa, waxaanu u sheegay CNN: Waxaanu u malaynaynaa dadkani in arintu dhab ka ahayn, taasi oo ka dhigaysa inay yahiin kuwo khatara. Omalanga ayaa yidhi mucaaridka ujeedooyinkooddu maha kuwo cad, umana malaynayo in ujeedadooddu tahay wadda xaajood, waayo ma garanayaan waxay doonayaan, waxaanu ku eedeeyey mucaaridka inay ku mashquulsanyahiin bililiqaysigga Goma.
Afhayeen ciidanka Congo u hadlay Col, Olivier Hamuli ayaa yidhi ciidamadda qalabka sidaa waxay sugayaan hawl gelinta dowladda, waxaanu u hogaansamaynaa Xabad-joojinta ilaa intii naloo sheegay.
Runiga oo Salaasaddii hadlaya ayaa yidhi mucaaridku waxay doonayaan inay fadhiistaan oo ay falanqeeyaa heshiiskii 23 March ee Bulshadda shicibkaa, dowladda iyo qaybaha kala duwan ee dadka reer Gongo si ay xal uga gaadhaan dowlad wanaag, dimuruqaadiyad, dhaqaale iyo nabadgelyo, waxuu kale oo yidhi waa in la bilaabaa baadhitaanno hub siintii Barigga Congo ( shisheeyaha) Kooxaha ciidanka dhinaca hubka ee ka shaqeeya Congo, sidda Ciidanka Caabinta ee lords FDLR, a Hutuuggu ay ugu badanyahiin kooxdaasi reer Congo, waa in laga guulaystaa. Runiga ayaa sheegtay in FDLR ay isku deyeen inay weeraraan Rwanda Salaasaddii, laakiin qaybaha M23 ayaa xidhay dagaal yahannadoodda, wax faallo ah oo dowladda Rwanda arintaasi ay ka bixisay ma jirto dhinaceedda. Runiga ayaa yidhi M23 waxay wadayaan gargaarka bili-aadminimo ee isku socodka, waxayna ugu baaqeen dadka inay ixtiraamaan doorka MONUSCO, xoogagga nabad ilaaliyayaasha Qaramadda Midoobey ee ku sugan Gobolka sharciyadana u haysta in ay ilaaliyaan dadka shacabkaa.
Previous PostKhudbadii Madaxweynaha Somaliland warbaahinta u mariyay shacbigaNext PostCodbixinta Doorashadda Deegaanka oo si Nabdoon uga Socota Somaliland	Blog